Ady amin`ny hanoanana Laharana 116 i Madagasikara
Lah. 116 amin`ireo firenena 119 i Madagasikara manoloana ny ady amin`ny hanoanana, araka ny tatitra nataon`ny Global Hunger Index (GHI).
Araka ity tatitra ity dia ao anatin`ny “zone orange” isika miaraka amin`ny salanisa 38, izay efa tondro ratsy amin`ny ady amin`ny hanoanana. I Haïti (35,5) , Sierra Leone (35,7) ary Zambie (37,6) no ao alohan`i Madagasikara ary Yémen (39,7) sy Tchad (45,4) no aoriana. I Bosnie Herzégovine, Biélorussie ary Chili no mitarika ny lohalaharana. Ny salanisan`ny mponina misedra ny hanoanana eto Madagasikara dia nitombo 11,3% nandritry ny valo taona. 43,1% tamin`ny taona 2018 raha toa ka 31,8% tamin`ny 2010.